Shuttering Igwe Ọdụdọ Manufacturers & Suppliers - China Shuttering Igwe Ọdụdọ Factory
Nkuku Igwe Ọdụdọ maka Ijikọ Magnetik Shuttering Systems ma ọ bụ Steel Ebu
Nkuku nju na-n'ụzọ zuru okè na-eji abụọ ogologo "L" ekara ígwè Ebu ma ọ bụ abụọ magnetik shuttering profaịlụ na ntụgharị. Mgbakwunye ndị a ga-ahọrọ iji mee ka njikọ dị n'etiti magnt akụkụ na nchara nchara.
Steel Lever Ogwe maka Retọhapụ Push / sere Button nju
Steel Lever Bar bụ a ekwekọghị ngwa maka atọhapụ ndị push / sere button ndọta mgbe mkpa ịkwaga ya. Ọ na-emepụta site elu ọkwa tube na ígwè efere site zọọ na ịgbado ọkụ usoro.
350KG, 900KG Loaf Magnet maka Precast Steel Rails ma ọ bụ Plywood Shuttering
Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ bụ otu ụdị ndọta magnet na ụdị achịcha. A na-eji ya iji dabaa ígwè okporo ígwè ma ọ bụ ihe mkpuchi plywood. Ngwunye ihe mgbakwunye zuru ụwa ọnụ nwere ike ịkwado nju achịcha iji jikọọ akụkụ akụkụ ahụ n'ụzọ siri ike. Ọ dị mfe iwepu ihe ndọta n'ime ọnọdụ site na ngwa ọrụ ntọhapụ pụrụ iche.
1T Type Igwe anaghị agba nchara Shell Shuttering Igwe Ọdụdọ na 2 Notches
1T ụdị igwe anaghị agba nchara shei shuttering magnet bụ ahụkarị nha maka ìhè Sanwichi pc ọcha mmepụta. O adabara 60-120mm ọkpụrụkpụ akụkụ ebu elu. N'èzí ụlọ anaghị agba nchara 201 na bọtịnụ nwere ike iguzogide corrosion site na ihe.
0.9m Ogologo Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe na 2pcs Integrated 1800KG Magnetik System
Nke a 0.9m ogologo magnetik n'akụkụ okporo ígwè usoro, bụ iso nke a ígwè formwork profaịlụ na 2pcs integrated 1800KG ike magnetik erughị ala usoro, nke ike-eji dị iche iche formwork ewu. Etiti a haziri nke ọma bụ maka arụpụta rọbọt na-arụpụta mgbidi abụọ.
Magnetik Shuttering Profaịlụ Sistem bụ nchikota arụmọrụ nke mkpuchi magnet na nchara nchara. Nọmalị ọ ga-eji site na robot njikwa ma ọ bụ ntuziaka na-arụ ọrụ.
2100KG, 2500KG Anam Udeme Force Precast Concrete Igwe Ọdụdọ Assembly maka Steel Formwork ma ọ bụ Plywood akpụzi Fixing
2100KG, 2500KG Precast Concrete Magnet bụ ụdị ike ikike ọkọlọtọ maka ntụgharị magnet, nke a na-atụ aro ka ukwuu maka idozi sidemould na ogwe osisi sandwich.
1800KG Shuttering Igwe Ọdụdọ na On / Off Button maka Prefabricated Building Formwork System
1800KG Shuttering Igwe Ọdụdọ bụ ahụkarị igbe ndọta maka gwara precast ebu na ihe mmepụta. N'ihi magnet siri ike magnet ụwa, ọ nwere ike ijide ebu na tebụl ike. Ọ na-ọtụtụ-eji ígwè formwork ma ọ bụ plywood ebu.
1350KG ma ọ bụ 1500KG ụdị magnetik formwork usoro na carbon nchara shea bụkwa a ọkọlọtọ ike ikike ụdị maka precast plateform fixing, nke na-ukwuu tụrụ aro iji maka gwara sidemould na precast ihe Sanwichi ogwe. Ọ nwere ike dabara nke ọma na ụdị ígwè ma ọ bụ ụdị plywood osisi.
900KG, 1Ton Box Igwe Ọdụdọ N'ihi Precast tilting Isiokwu akpụzi Fixing
900KG Magnetic Shuttering Box bụ usoro magnetik a ma ama maka imepụta mgbidi mgbidi, ma akụkụ osisi na nke nchara, nke nwere igbe igbe carbon na usoro nke magnetik neodymium.
450KG Igbe nju na Push-sere Button
450Kg ụdị igbe ndọta bụ obere nke magnetik usoro maka idozi sidemold na precast ihe table. Ọ na-eji na-emepụta ìhè precast ihe panel dị ka 30mm ka 50mm ọkpụrụkpụ.